Ikhaya leNtaba yaseJasper East
Rente ikhaya lethu lonke elitofotofo elisezintabeni. Awuyi kuphoxeka ngeembono ezimangalisayo zeentaba kunye noyilo oluhle lwale ntaba yokurhoxa. Eli khaya libekwe kwindawo ezolileyo yeFolding Mountain Village, nje iikhilomitha ezi-4 ukuya kwisango leJasper National Park, iikhilomitha ezingama-20 ukuya eMiette Hot Springs, kunye nemizuzu engama-35 yokuqhuba ukuya edolophini yaseJasper. Ewe kunjalo, awufuni kuphoswa kutyelelo kwiFolding Mountain Brewery edumileyo yehlabathi kunye neRestaurant, kukuhamba nje ngokulula ukusuka kumnyango wakho wangaphambili.
Le yeyona ndlu ikufutshane kwindawo yaseJasper abakhenkethi abanokuyirenta kwa-Airbnb. IiPaki zaseKhanada azibavumeli abahlali baseJasper ukuba baqeshe amakhaya abakhenkethi eJasper National Park ngenxa yeemfuno zokuhlala kunye nemithetho yendawo. Ekubeni ikhaya lethu lihlala ecaleni kwepaki oku akusebenzi kuthi. Ikhaya lethu libandakanya ngaphezulu kwe-2500 yeenyawo zesikwere sendawo yokuhlala ehleli kwindawo yabucala eyi-3/4 yehektare enemibono yeentaba. Yonwabela indawo, imfihlo, kunye nendalo engqongileyo kwiholide yakho. Kukho iindlela ezininzi zokuhamba ngeenyawo kwindawo ekufutshane.
Igumbi lokuhlambela elikhulu elinamagumbi amathathu e-en-suite linendawo yokuhlambela eneenyawo ezintandathu (akukho bhafu), ukukhanya kwesibhakabhaka kunye neesinki eziphindwe kabini ngelixa igumbi lokuhlambela elikumgangatho ophambili lineshawari yokuhamba enesibhakabhaka esikhulu.
Nceda uqaphele ukuba igumbi lokulala eliphezulu liphezulu ngoko kunokuba nzima ukufikelela kubantu abanemiba yokuhamba. Amanye amagumbi amabini okulala akumgangatho omkhulu.
INKCAZELO: Iikhamera zokhuseleko - Eli khaya lineekhamera zokucupha NGAPHANDLE. Nceda bhukisha kuphela ukuba ukhululekile ngolu phawu lokhuseleko.
Ngaba ufuna indawo engakumbi? Jonga kuluhlu lwethu olutsha, iKhaya elimangalisayo leNtaba. Cofa kwifoto yam yokwamkela ukujonga.
4.80 · Izimvo eziyi-142